Soosaaraha taxanaha Soosaaraha Shiinaha Perkins iyo qeybiye | Xinneng
In kabadan 80 sano, UK Perkins ayaa hogaamineysay keenista naaftada iyo matoorada gaaska suuqa 4-2,000 kW (5-2,800 hp). Awoodda muhiimka ah ee Perkins waa awooddeeda ay ku qaabeyn karto matoorada si sax ah si ay ula kulanto shuruudaha macaamiisha, taas oo ah sababta xallinta mashiinadeeda ay ku kalsoon yihiin in ka badan 1000 soo-saareyaasha hormoodka u ah warshadaha, dhismaha, beeraha, maaraynta qalabka iyo suuqyada koronto dhalinta. Taageerada wax soo saarka caalamiga ah ee Perkins waxaa bixiya 4,000 qaybinta, qaybo iyo xarumo adeeg.
In kabadan 80 sano, UK Perkins ayaa hogaamineysay keenista naaftada iyo matoorada gaaska suuqa 4-2,000 kW (5-2,800 hp). Awoodda muhiimka ah ee Perkins waa awooddeeda ay ku qaabeyn karto matoorada si sax ah si ay ula kulanto shuruudaha macaamiisha, taas oo ah sababta xallinta mashiinadeeda ay ku kalsoon yihiin in ka badan 1000 soo-saareyaasha hormoodka u ah warshadaha, dhismaha, beeraha, maaraynta qalabka iyo suuqyada koronto dhalinta.
Taageerada wax soo saarka caalamiga ah ee Perkins waxaa bixiya 4,000 qaybinta, qaybo iyo xarumo adeeg. Shabakada qeybiyaha 'Perkins' waxay siisaa taageero meelkasta oo aduunka looga baahdo heer aad u saraysa ayaa loo dejiyay si loo hubiyo in shabakada qaybinta ay adeeg aad u fiican u qabato dhamaan macaamiisha
Halbeegyada Farsamada (50Hz)
Qaabka "E" waa qalabka korontada ku shaqeeya;
Shiinaha 0 # naaftada fudud ama ka sareeya ayaa lagula talinayaaed loogu talagalay dareemayaasha sutech leh kala soocida biyaha saliidda si loo hubiyo shidaalka nadiifka ah.
Soo jeedi in la qaato API CF ama saliid sare, temsaamiga / nafwaayaha 15W-40
Halbeegyada Farsamada (60Hz)
(l / saac)
Qaabka leh "E" waa awood heegan ahgensets;
Soo jeedi in la qaato API CF ama ka sareeya oil, heerkulka / nafwaayaha 15W-40
Hore: Taxanaha Generator MTU
Xiga: Taxanaha Generator SDEC
Taxanaha Generator MTU